Kitra – «Can 2019»: “Manana herijika ho tafita ny Barea de Madagascar”, hoy i Dupuis | NewsMada
Kitra – «Can 2019»: “Manana herijika ho tafita ny Barea de Madagascar”, hoy i Dupuis
Nitafa tamin’ny mpanao gazety, tetsy amin’ny Galaxy Andraharo, i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar, nialoha ny niaingan’ny delegasiona, ho any Marrakech, Maraoka, omaly talata, hiatrika ny fampivondronana faharoa. Nambarany fa na tsy ho mora aza ny fihaonana hatrehina, manana herijika, hiakarana amin’ny dingana ampahavalon-dalana, ny Barea de Madagascar.
“Ilaina ny mandresy an’i Ginea, eo amin’ny lalao voalohany, ny 22 jona, ho avy izao. Zareo Gineanina, izay heveriko fa mafy ao anatin’ity vondrona ity fa tsy araka ny fiheveran’ny sasany azy”, hoy izy.
Ankoatra izay, nambaran’i Dupuis, hatrany fa lalao tena goavana ny fihaonana amin’i Borondi, ny 27 jona. Borondi, izay tsy nisy naharesy ihany koa nandritra ny fifanintsanana. “Manana ny lanjany ny fihaonana amin’i Borondi, izay tsy maintsy resena, mialoha ny hiatrehana amin’i Nizeria, eo amin’ny lalao farany”, araka ny nambaran’i Dupuis, hatrany. Nohamafisiny fa iray ary tena mivondrona, ireo mpilalao rehetra ao anatin’ny Barea de Madagascar. Nanome toky izy fa hanao izay ho afany ireo mpilalao sy ny ekipa teknika rehetra, hahatafita ny Barea de Madagascar.
Ankoatra izay, mpilalao 24 no nentina any Maroc satria misy ahiahy kely eo amin’i Dupuis, sao mety hisy ny maratra. Amin’ny fiafaran’ny fampivondronana, any Marrakech vao hivoaka ny tena anaran’ireo 23, handeha ho any Egypta.
Ireo mpilalao 24
1-Leda, 2-Melvin, 3-Dabo, 4-Metanire, 5-Bapasy, 6-Morel, 7-Mamy Gervais, 8-Caloin, 9-Boyer, 10-Debakely, 11-Mombris, 12-Fontaine, 13-Ibrahim, 14-Dax, 15-Baggio, 16-Ryan, 17-Njiva, 18-Bolida, 19-Anicet, 20-Carolus, 21-Marco, 22-Paulin, 23-Gros, 24-Faneva Ima